खुर्सानी खेतिबाट मनग्य आम्दानी – Rajmarg Online
खुर्सानी खेतिबाट मनग्य आम्दानी
दाङ चैत १२ । दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गिदिनियाका जितेन्द्र चौधरीले खुर्सानी खेतिबाट मनग्य आम्दानी गर्नुभएको छ । आफ्नै १३ कठ्ठा जग्गामा खुर्सानी खेती गर्नु हुदै आउनु भएका चौधरीले केहि वर्ष देखि खुर्सानी खेति गर्दै आउनु भएको छ ।
नामधारी जातको खुर्सानी खेतीबाट राम्रो आम्दानी भैरहेको उहाको भनाई छ । ‘६ वर्ष भयो नामधारी जातको खुर्सानी खेती गर्न लागेको, अहिलेसम्म राम्रै भएको छ ।’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘घरका सबै परिवार नै खुर्सानी खेतिमा काम गर्दैछौँ ।’ गएको वर्ष १५० क्वीन्टल खुर्सानी उत्पादन भएको चौधरीले बताउनुभयो । खाद्यन्न भन्दा पनि खुर्सानी उत्पादनबाट बढि आम्दानी हुने चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘गएको वर्ष एक सय पच्चिस क्वीन्टल खुर्सानी बेचेर खर्च कटाइ ८ लाख चोखो आम्दानी गरेँ’ ।
यो वर्षपनि १३ कठ्ठा जग्गामा खुर्सानी लगाउनु भएको छ । रु. २० हजारको लगानी लगाएर गरिएको खेतिबाट यो वर्ष १० देखि १२ लाख आम्दानी हुने उहाले आँकलन गर्नुभएको छट । ‘दुईचार जना ब्यक्तिहरुको सरसल्लाहबाट यो नामधारी जातको खुर्सानी लगाएको थिएँ, पहिलो वर्ष धेरै खासै उत्पादन भएन, तर अहिले धेरै राम्रो छ ।’ चौधरीले भन्नुभयो ।
यो वर्ष चौधरीले ५१ क्वीन्टल खुर्सानी विक्रि गरिसकेको बताउनुहुन्छ । ‘गएको वर्ष भन्दा यस वर्ष बढि उत्पादन भएको छ’ चौधरीले बताउनुभयो, ‘थोकमा ४५ रुपैँया प्रतिकिलो र फुटकरमा ५० रुपैँया प्रतिकिलो विक्रि हुन्छ ।’ उहाले बताउनुभयो । देउखुरीको अधिकांश क्षेत्रबाट खुर्सानी खेती गरेको स्थानमै खुर्सानी लिन व्यापारीहरु आउने गरेका छन् ।
व्यापारीहरु सल्यान, तुलसीपुर, घोराही, भालुवाङ, प्यूठान लगाएतका क्षेत्रहरु आएउने गरेको चौधरीले बताउनुभयो । खुर्सानी खेतीबाट चौधरी सन्तुष्ट भएपनि, बजारको भाउमा आफु असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । १३ कठ्ठा जग्गामा खुर्सानी खेती पछि मकै, धान र गहुँ खेती पनि गरिन्छ ।